Ning: Soo Celinta iyo Qaabaynta Su'aalaha API | Martech Zone
Axad, Agoosto 24, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkan dhammaadkiisa waxaan ka shaqeynayay mashruuc aan dooneynay inaan ka soo saarno waxyaabaha oo dhan Yar Indiana (la dhisay Ning) galay bog dhexe. The Bandhig Fringe Indianapolis way socotaa oo Yar Indiana waxay rabtay inay gacan ka geysato kor u qaadista dhacdada.
Ning's API maahan kan ugu abaabul badan, dukumiintiyada iyo codsiyada tusaalaha ahna runtii way ka maqan yihiin. Sababta oo ah ciriiri waqtiga ah awgeed si aan u helo bogga oo socda, waa inaan qaata xoogaa goyn ah halkii aan ka dhisi lahaa xalka saxda ah. Bogga hadda jira wuu shaqeeyaa, laakiin si adag ayaa loo calaamadeeyay iyada oo aan dabacsanaan badan lahayn. Waxaa laga yaabaa inay jiri karto xoogaa ansaxin dheeraad ah oo ah waxa ku jira sidoo kale (tusaale: hubinta urlyada baloogyada loo qaabeeyo si ka duwan ururada ururada, iwm.).
Jidka Ning API shaqeeya waa in ay tahay wax aad u qurux badan mishiinka weydiinta halka aad ka heli karto natiijooyinka aad ugu baahan tahay quudinta RSS. Waxaan codsanay in qofkasta oo wax ku qora barta, wadahadal bilaabo, ama sawiro soo galiya uu si gaar ah ugu calaamadeeyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin indyfringe-2008. Tani waxay ii oggolaaneysaa inaan dhiso cinwaan cunno u gaar ah oo dib u soo celiya dhammaan waxyaabaha ku jira (oo hoos ugu soo degaya taariikhda la daabacay ee leh cinwaanka soo socda:
/xn/atom/1.0/tag( qiime =%27indyfringe-2008%27)/content?order=published@D
Bogga dhexdiisa, ka dib ayaan soo saaraa oo abaabulaa xogta ku jirta bogga anigoo isticmaalaya Fasalka RSS Magpie loogu talagalay PHP. Dhagsii si aad ugu dhaweyso koodhka ama waad awoodaa u fiirso ama u soo degso.
API oo qaabe "width =" 300 ″ height = "159 ″ class =" aligncenter size-medium wp-image-2694 ″ />
Halkan waxaa ku yaal shaqooyin xiiso leh. Mahadsanid Tyler Ingram (oo ka yimid gurigeyga dugsiga sare ee Vancouver!) yaa ka caawiyay qaabeynta taariikhaha si sax ah Twitter.
Mar labaad, maahan lambarka ugu nadiifsan oo sidoo kale looma kala jabin shaqooyinka loogu talagalay isticmaalka degdegga ah - laakiin way shaqaysaa. Replace Waxaan badalayaa xiriidhada si urllada si sax ah loo jiheeyo, waxaan ka saaraa wixii HTML ah tags ah waxyaabaha ku jira, waxaan qaabeeyaa taariikhda, oo waxaan xadeeyaa tirada erayada la soo bandhigay si natiijada bogga ay sidan ugu egto
Qaar ka mid ah Babble-ka Babbling Banshee Sida dib-u-eegiddayda Murugo Wanaagsan, Sidney waxaa jiray jajabyo la jeclaan karo iyo qaniinyo aan ahayn… 8/24 11:55 AM
Tani API waa faa iido aad u weyn maxaa yeelay dhab ahaan waad iska qori kartaa waxyaabaha iyo mowduucyada shabakadaha Ning oo si gaar ah loo calaamadeeyay, ama waxaad ku dhex dari kartaa degel dibedda ka kooban waxyaabaha Ning ka kooban. Waxaan rajaynayaa oo kaliya in Ning ay ku shaqeyso codsiyada muunad iyo dukumiintiyada sidaa darteed dadka ila midka ah way sameyn karaan tan iyagoon waqti badan ku bixin!